Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Uganda War Deg Deg Ah » Uganda ilaa Dubai: mar haddii ay ka baxaan liiska cas ee COVID
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Imaaraadka Carabta • Uganda War Deg Deg Ah • Wararka kala duwan
Ugaandha ilaa Dubai: Diyaar u ah inay duusho
Diyaaradda Uganda Airlines ayaa qarka u saaran inay bilowdo duullimaadyada dhaadheer ee Dubai ee la qorsheeyay Oktoobar 2021, waxaa xigi doona London iyo Guangzhou tan iyo markii Airbuses ay si rasmi ah uga heshay Shahaadada Hawl-wadeenka Hawada (AOC) Hay'adda Duulista Rayidka ee Uganda (UCAA) shalay, Ogosto 23, 2021 .
Horumarintani waxay soo gabagabaynaysaa geedi socodkii shahaadaynta 5-waji ee dheeraaday kaas oo arkay lammaaneyaasha side A330s oo salka ku haya Entebbe.
Shirkaddu hadda waxay isku beddeli kartaa CRJ-900 iyo awoodda sare ee A330 ee adeegyada, iyadoo ku xiran baahida rakaabka iyo xamuulka.
A330s waxaa loo adeegsan doonaa adeegyada London, Dubai, Mumbai, iyo Guangzhou marka Uganda ay ka baxdo liiska cas ee COVID-19.
Ku -simaha Agaasimaha Guud ee UCAA, Fred Bamwesigye, ayaa kooxda ku bogaadiyay markii ay si guul leh u dhammaystireen hawsha ku darista Airbus -ka Mitsubishi CRJ 900 ee AOC intii lagu jiray xafladdii wareejinta oo lagu qabtay Entebbe.
Wejigii ugu dambeeyay ee hannaanka shahaadaynta 5-marxaladood ayaa raacay duulimaad ka yimid Entebbe, Uganda, Johannesburg, Koonfur Afrika, markii kabtanka tababarka sare Francis Barros iyo kabtanka tababarka Pete Thomase ay ka degeen Airbus #A330-800 taxanaha Neo bishii Ogosto 12, 2021, garoonka OR Tambo International Airport.
Horumarku wuxuu soo afjarayaa geedi socodkii shahaadaynta 5-waji ee dheeraaday kaas oo arkay lammaaneyaasha sideed A330s oo saldhigtay Entebbe, oo sugaya AOC tan iyo markii ay diyaaraddu dhammaystirtay amarkii wadaha qaranka ee labaad ee 2 A330s bishii Febraayo oo ka yimid soo saaraha Airbus oo sugaya AOC.
Waxay hadda siinaysaa diyaaradda dabacsanaan inay isku beddesho CRJ-900 iyo awoodda sare ee A330 ee adeegyada, iyadoo ku xiran baahida rakaabka iyo xamuulka.
Sida laga soo xigtay Ku-simaha Agaasimaha Guud ee Shirkadaha Diyaaradaha Uganda, Jennifer Bamuturaki, A330s-ka waxaa loo adeegsan doonaa adeegyada London, Dubai, Mumbai, iyo Guangzhou marka Uganda ay ka baxdo liistada cas ee COVID-19 ee dalalka loo socdo. Xayiraadaha sii socda ee safarka ka imanaya Uganda waxay arkeen adeegga qorshaysan ee Dubai inuu hoos u dhaco bil ilaa Oktoobar, halka kan London hadda loo wareejiyay horaantii 2022.
London, Mumbai, iyo Guangzhou ayaa ka mid ah meelaha ugu sarreeya ee aan la keydin ee u socda Entebbe marka loo eego tirakoobka sannadka 2019. Waddada Entebbe-London waxaa ku jiray 84,000 oo rakaab ah oo safar-wareeg ah sannadka dhexdiisa, Mumbai waxaa ku xiga 42,000 halka Guangzhou ay ku jirto 29,000. Taasi waxay ka dhigan tahay maalin walba rarka 230 rakaab ah oo u dhexeeya Entebbe iyo London - 115 ilaa Mumbai iyo 79 Guangzhou.
Ugandha, laga bilaabo Janaayo 3, 2020, illaa maanta, Ogosto 24, 2021, waxaa jiray 118,673 kiis oo la xaqiijiyey oo ah COVID-19 oo ay dhinteen 2,960, ayaa lagu soo wargeliyey Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO). Laga bilaabo Ogosto 23, 2021, wadar ahaan 1,163,451 qiyaasta tallaalka ayaa la maamulay.